The Graceless Fall of Robert Mugabe, by Geoffrey Nyarota – Bridge Books add wishlist show wishlist remove wishlist add compare show compare remove compare preloader
The Graceless Fall of Robert Mugabe, by Geoffrey Nyarota
The Graceless Fall of Robert Mugabe, by Geoffrey Nyarota Booksite Afrika
R 115.00 R 230.00 11500
The ousting of Robert Mugabe as Zimbabwe's president took the world by surprise. In this book, veteran Zimbabwean journalist Geoffrey Nyarota explains how and why the events of November 2017 happened as they did. The book describes the rifts within ZANU-PF as Mugabe sidelined anyone who might challenge his power, and the creation of opposing factions that supported vice president Emmerson Mnangagwa and First Lady Grace Mugabe respectively. It traces the growing ambition and power of Grace Mugabe, culminating in the sacking of Mnangagwa as vice president in November 2017, and shows how this finally spurred ZANU-PF to rid itself of the president who had done so much damage to the country over the decades. Written with the insight of a journalist from inside Zimbabwe, this is a fascinating account of the rise and fall of one of Africa's longest-ruling dictators.
Default - R 115.00